The Xbox Series X Microsoft inotevera hombe koni, kubira korona yemagetsi kubva kwaSony's PlayStation 5. Iyo inouya izere nekutsvagisa ray-kuratidzira kwechokwadi nekuvhenekesa, kumhanya kweSSD yekushambadzira kwepasirese uye kurodha, uye CPU ine simba rakanyanya. 4K resolution ine 60 mafuremu pasekondi inofanirwa kuve yakajairwa. Microsoft iri kuvhura zvakare inodhura vhezheni, inonzi iyo Xbox akateedzana s. Pamusoro pezvo, yako yakanakisa Xbox Imwe mahedhifoni ichashanda pane iyo Xbox Series S uye X consoles. Kupfuura izvozvo, chero chinowanikwa chinoshanda pane iyo Xbox Series S uye X, chaizvo. Kusvika izvozvi, isu takabatanidza akanakisa Xbox mahedhifoni atakaedza uye neaya atakasimbisa kuti anowirirana neiyo Xbox Series X uye S, sekubvumidzwa kwavo nevagadziri. Aya ndiwo akanakisa Xbox Series X, Series S mahedhifoni.
Yakanakisa Xbox Series X, Series S Headsets 2020
LucidSound LS35X - Best Overall: Epic soundscape inosangana neakakura, akasununguka dhizaini, emhepo, anotonhorera nzeve, uye akakura maficha maficha
Astro A50 - Kwakanakisisa Kuenderana: Iyo Astro A50 haina kudhura, asi yakanakisa recharge doko uye yakakura zvinhu zvezvinhu zvinovaita ivo repamusoro-pasherufu sarudzo.
Turtle Beach Elite Pro 2 - Yakanakisa Wired: Kunyaradzwa kukuru, kuvaka mhando, uye ruzha rwemombe zvinoita izvi sarudzo huru.
Turtle Beach Stealth mazana matanhatu - Yakanakisa Budget Bluetooth: Kana iwe uchida combo Bluetooth uye Xbox isina waya, iyi sarudzo yeepiki.
LucidSound LS50X - Yakanakisa Premium: Kana iwe uchida yepamusoro-mutsara headset inosanganisa Bluetooth neXbox wireless, iyi ndiyo yakanyanya kunaka yaunogona kutenga.
SteelSeries Arctis 1 - Yakanakisa Kukosha Wireless: Iwe unogona kubata yekupinda-chikamu chisina waya yemusoro ye $ 100 yekutenda kune yakanaka SimbiSeries Arctis 1.
HyperX CloudX - Inonyanya Kukosha: Kunyange paine mahedhifoni anodhura kunze uko, yakachipa yepamusoro-soro misoro inonyatso kuguma ndeye HyperX CloudX, ine zvinhu zvine simba uye huru odhiyo.
Corsair HS75 XB - Rakanakisa Ruzha Rwakachena: Kana iwe uchingoda yakanakisa kurira iwe yaunogona kuwana pasina imwe yekuwedzera mafriza, usatarise kumberi pane isina musoro mushe Corsair HS75 XB.
Yakanakisa Xbox Series X / S Headset Zvekare: LucidSound LS35X
Iyo LucidSound LS35X muenzaniso unoshamisa wezvinhu zvinogoneka pazvikwata zvepamusoro zvekugadzira dhizaini. Kubva pane izvo zvigadzirwa uye kuvaka kune nyaradzo, odhiyo, uye maficha, iyo LS35X inokunda pane ese kumberi.
Iyo LS35X yaive yekutanga headset kushandisa Microsoft's Xbox isina waya chiratidzo chekubatanidza, ichitsiva tambo dzese nemadongles. Inotamba inoyevedza ese-ezuva-bhatiri hupenyu, inogona kudzoreredzwa kuburikidza neUSB, uye inouya ne-pa-nzeve kutonga kwekuchinja, odhiyo kusanganisa, uye vhoriyamu. Zvese zvekutonga uye dials zvakaiswa zvinyoronyoro. Iyo maikorofoni inosvikika ine LED mbeveve mwenje inopedzisa pasuru, iine pamusoro-avhareji mhando yemodhiyo yemusoro wemusoro mune ino chikamu.
Chandinofarira chimiro cheLS35X ndiyo inotonhorera gel munzeve, iyo inongove yakadzika munzeve, kunyanya munzvimbo dzinodziya. Iyo ruzha haina slouch zvakare, ine inoshamisa, punchy ruzha rwakadzikama pakati pekunyudzwa uye tactical accentuation. Iyi ingori yakakura-yakatenderedza isina waya Xbox headset, yakakodzera kutariswa kwako. Uye kuenderana kumashure kunoita kuti ive ine nharo yakanakisa Xbox Series X, Series S headset yaunogona kutenga. Iyo LS35X ine premium sibling mu LS50X, iyo inosanganisa Bluetooth, iyo iwe yaunogona kuona zvakare pasi pazasi.
Yakananga-ku-Xbox isina waya
Inoda PC kuti igadzirise firmware
Wirelessness paPC inoda yakaparadzana Xbox Wireless dongle
Kubva $159 kubva kuAmazon $ 180 paWalmart
Iyo LucidSound LS35X ndiyo headset yandinogara ndichidzoka kwairi. Iyo inotonhorera gel earcups inorota munzeve uye inorumbidzwa ne epic soundscape, stellar maikorofoni, uye rock-solid isina waya nyore.
Yakanakisa Xbox Series X/S Headset yeVersatility: Astro A50
Iyo Astro A50 headset ndiyo yakasarudzika sarudzo pane iyi runyorwa, uye nechikonzero chakanaka. Iyi isina waya headset inouya neyakasarudzika magineti yekuchaja dock kuti ive nechokwadi chekuti unogara wakasimudzwa uye wakagadzirira kuzununguka zvisinei kuti wanga uchitamba kwenguva yakareba sei. Iyi ndiyo headset yandinoshandisa pachangu, kunyanya nekuda kwekuita kwayo kwakasiyana-siyana kupfuura zvimwe zvese. Astro iri kuzvigadziridza zvakare yeXbox Series X uye S ine firmware sarudzo yekugonesa USB kuenderana, zvichiita kuti ive nyore imwe yeakanakisa Xbox Series X, Series S mahedhifoni aunogona kutenga.
Dhoko reAstro A50 rinouya nekuenderana kweSPDIF optical odhiyo, zvichireva kuti unogona kuiisa yakananga muTV uye woshandisa iyo seyako ruzha sosi. Izvi zvinoreva kuti unogona kuishandisa nechero console yaunoda sezvo ruzha rwuri kubuda muTV kwete bhokisi. Iwe zvakare unozokwanisa kuibatanidza kuburikidza ne USB kune yako Xbox Series X kana Series S kana iwe usingafarire kushandisa SPDIF optical. Pamusoro pezvo, unogona kubatanidza USB kuPC pachinzvimbo, uchisanganisa ruzha kubva paTV yako uchishandisa zvirongwa zvekutaura nezwi seDiscord nezvimwe zvakadaro pakombuta yako. Ndiko kuita kwakasiyana-siyana kunouya nenzira inoshamisa kana iwe uri mugadziri wezvemukati kana kutamba pamidziyo yakawanda.
Iyo A50 haina slouch mudhipatimendi renzwi zvakare. Kunyangwe ini ndisiri fan hombe yavo yeonboard Dolby mhinduro, Astro's own sound profile yakapfuma, ichisimbisa tactical audio cues. Maikorofoni haina kunyanya kunakidza, asi flip-to-mute basa chishandiso chinobatsira chekukurumidza kubaya kubva muhurukuro. Iyo headset yakasununguka uye inoyevedza, zvakare, kunyangwe iyo leatherette accessories, iyo yakanyanya kugadzikana, inotengeswa zvinosuruvarisa zvakasiyana.
Iyi ihedhiseti yevanhu vasina hanya nekupwanya bhangi kuti ive nyore uye yakarongeka, isina waya yekutamba.
SPDIF optical-in yeTV
Kunzwika kwakasimba uye kunyaradza
Hupenyu hukuru hwebheteri
Kuchaja kwakaringana dock
Ichashanda ne USB pane Xbox Series X/S
Yakanyanya kudhura Xbox headset kunze uko
Kubva ku $ 300 kuAmazon $ 425 paWalmart
Kusiyana-siyana kunouya nemubhadharo
Iyo SPDIF-inoenderana isina waya dock inoita iyi yakanakisa headset yekusanganisa ruzha kubva mumutambo wako uye chimwe chishandiso senge laptop PC, yakanakira vanoyerera uye vagadziri vemukati kana kungogara Xbox gamers vanoda kurerukirwa kweiyo magineti dock.
Yakanakisa Wired Xbox Series X/S Headset: Turtle Beach Elite Pro 2
Iyo Elite Pro 2 kubva kuTurtle Beach yakanakisa-yakatenderedza isina waya headset, ine mhando yekuvaka yakasimbiswa nesimbi, inoyevedza dhizaini chimiro, yakagadzika bhandi remusoro, uye gobvu, rakanyatso nyuchirwa mhepo munzeve.
Iyo Elite Pro 2 haina akawanda maficha, kunyangwe ichiuya nemhando yepamusoro-in-line vhoriyamu yekudzora module uye bhatani risingatauri patambo yayo 3.5mm. Kana iwe uchida mamwe maficha senge mic yekutarisa, iwe unofanirwa kuwedzera iwo kuburikidza nesoftware senge Xbox dashboard ruzha zvigadziriso, kana imwe yekuwedzera, seElite Pro Tactical Audio controller. Iyi ihedhiseti ndeye zvese zvekuroverera izvo zvekutanga, uye mune izvo, zvinozviita zvakanyanya.
Iyo voluminous soundscape inopa yakanyatsojeka pfungwa yekuzivikanwa kwenzvimbo kana yasanganiswa neDolby Atmos kana Windows Sonic. Nekudaro, iwe unogona kusimudza izvi mberi nekushandisa imwe yeTurtle Beach's amps yekuwedzera kwakaringana 7.1-chimiro chekuziva, iyo inobikawo mune imwe mic yekutarisa zvakare.
Ini pachangu ndakashandisa iyi mahedhifoni kwemwedzi yakawanda uye ndaiifarira zvechokwadi, ndichiisiya chete nekuti ini ndakawana isina waya iri nyore mukuseta dhesiki rangu razvino. Turtle Beach haina sarudzo inokwikwidza munzvimbo iyoyo. Seye wired headset, zvakadaro, izvi hazviodze mwoyo.
Inonzwa zvakanaka kupfeka
Chivakwa chakasimba chine furemu yesimbi
Basic headset inoshaya onboard maficha
$ 120 kubva kuAmazon $ 100 paWalmart
Iyo Elite Pro 2 inoshaya mabhero uye muridzo weiyo isina waya headset ine onboard maficha, asi inoita basa se 3.5mm wired mhinduro, izere neyakagwinya dhizaini inofanirwa kuiona ichigara kwenguva refu kupfuura mazhinji evamwe vayo.
Yakanakisa Xbox Series X/S Headset ine Bluetooth: Turtle Beach Stealth 700 (Gen 2)
Iyo Turtle Beach Stealth 700 yakabata yayo yechipiri-gen vhezheni muna 2020, ichivaka payakagadziridzwa dhizaini misimboti yeStealth 700 gen-1 nekusimba kwakasimba uye hunhu hwakazara.
Iyo Stealth 700 yemitambo inoshamisa odhiyo, inokwenenzverwa neTurtle Beach's "SuperHuman Hearing" preset, inosimbisa mafambiro evavengi, inosimudzira kutamba kwehunyanzvi. Iyo yakafararira inonzwika uye inonakidza bass inovaita sarudzo yakanaka yemimhanzi nemamuvhi uku vachisimudza mitambo yevatambi mumwe chete ine inonyudza software yakatenderedza ruzha.
Iyo Stealth 700 inosanganisa iyo Xbox Wireless siginecha neBluetooth, ichikubvumidza iwe kusanganisa odhiyo kubva kuXbox koni kana PC kuburikidza neXbox Wireless USB dongle ine yakabatana Bluetooth PC kana nhare mbozha. Izvi zvakanakira vanogadzira zvemukati vanoda kunzwa co-op vadyidzani kuburikidza nechat zvirongwa seDiscord pasina kubaira Xbox odhiyo mukuita. Iyo on-nzeve vhoriyamu dials inoita kuti zvive nyore kugadzirisa musanganiswa kune zvaunofarira, uye yakapetwa nharembozha inokupa iwe kumwe kutonga pamusoro pechiitiko chako.
Inokutendera kuti usanganise chiratidzo cheXbox uye chiratidzo cheBluetooth
Ruzha rukuru rune mabhesi anoyevedza
20 ~ awa yehupenyu hwebhatiri
On / off nyika dzakasungwa kune yako paired console
Yakanakisa Bluetooth pane bhajeti
$ 150 kubva kuAmazon $ 150 paWalmart
Kana iwe uchida headset iwe unogona kushandisa zvese neXbox yako uye yako smartphone kana PC panguva imwe chete, iyi isina waya Xbox headset ine Bluetooth combo isarudzo huru isingazoodze moyo.
Yakanakisa Premium Xbox Series X/S Headset: LucidSound LS50X
Iyo LucidSound LS50X haisi imwe chete yeakanakisa mahedhifoni ane Bluetooth; zviri, zviri nyore, imwe yeakanakisa Xbox mahedhifoni kunze uko, nguva.
Iyo LucidSound LS50X chiitiko cheprimiyamu, ine chinongedzo cheXbox One, Xbox Series X/S, PC, uye nharembozha, nekuda kweiyo yakaparadzana Bluetooth inogamuchira. Iyo LucidSound LS50X inoshevedzera premium mhando pamwe chete neaxis yega yega, ine kuvaka kwakasimba uye zvemhando yepamusoro zvinhu, yepamusoro-yekupedzisira inonzwika ine yakaringana odhiyo mbiri ine kupatsanurwa kukuru, uye zvine nharo yakanakisa headset mic kunze uko. Iyo headset inouyawo ne hardshell inotakura kesi yechiyero chakanaka.
Chinhu changu chandinofarira nezve LucidSound LS50X ndeye-nzeve chiitiko. Iyo odhiyo kudhirowa ingori yakasarudzika uye yaunofarira munhu. Asi ndiyo gobvu inotonhorera gel munzeve iyo inonyatso tora iyi headset kune inotevera nhanho. Kunyangwe munzvimbo dzinodziya, iyi mahedhifoni inofefetera uye inonakidza kupfeka mukati menguva refu yemitambo yemitambo, ine zviri nyore zvekudzora nzeve uye yakapfava dhizaini yakakodzera kushandiswa pamba neruzhinji. Kwandiri, iyi ndiyo yakanakisa headset yaunogona kutenga izvozvi, asi chokwadi, havasi vese vanoda Bluetooth, iyo inosundira mutengo wakakwira kupfuura iwo weLS35X cousin yayo.
Yakanakisa 15-18 awa hupenyu hwebhatiri
Rock-yakasimba Xbox isina waya chiratidzo
Hunhu hwekuteerera hunoshamisa
Premium kunyaradza uye zvinhu
Imwe yeakanakisa headset mics
Yakanakisa Premium neBluetooth
$ 250 kubva kuAmazon
Imwe yezvakanakisa zvaunogona kutenga
Kana iwe uchida chiitiko cheprimiyamu chinogona kubatana kune chero papuratifomu, iyi ndiyo yako yakanakisa uye yega sarudzo.
Yakanakisa Xbox Series X/S Headset ye Wireless Value: SteelSeries Arctis 1
SteelSeries mutungamiri weindasitiri, achivaka zvigadzirwa zvemhando yemhando dzemitengo. Nekukosha kwakachena, iyo SteelSeries Arctis 1 (Wireless) Xbox headset inomiririra kutengeserana chaiko.
Pamadhora zana, iyi isina waya headset inoshandisa USB dongle, kusiyana nemamwe mawire Xbox mahedhifoni pamusika. Zvakadaro, yekugadzira uye kurira kwemhando, idiki yetrendsetter uye inouya neCyberpunk 100 sarudzo yekugadzira futi.
Maikorofoni inogona kunge isinganakidze sezvazvingaite, uye zvakajeka, kumwe kukanganiswa kwakaitwa mudhipatimendi rezvishandiso nekuvaka kuti uwane iyi mutengo bracket. Ini handidi kuikurudzira kune wechidiki, semuenzaniso, sezvo inogona kuputswa. Nekudaro, kana iwe uri munhu mukuru anochengeta magiya avo, mashoma mahedhifoni anogona kuzvirumbidza iyi poindi yemutengo uku uchiroverera izvo zvakakosha zvakanyanya.
Hupenyu hwebhatiri hwemaawa makumi maviri
Nzvimbo huru yemutengo
Mic haina kunaka
Kuvaka kunogona kunge kusingabvumidze vana
$ 90 kubva kuAmazon
Zvinhu zvikuru zvinogona kuuya mumapaketi akachipa
Iyo SteelSeries Arctis 1 Wireless Xbox headset ndiyo huru yekupinda-level isina waya sarudzo kune avo vanoda kukanda tambo.
Yakanakisa Xbox Series X/S Headset yeKukosha: HyperX CloudX
Kune mahedhifoni akachipa kunze uko, asi ini ndinowanzozeza kukurudzira mahedhifoni anodhura pane izvi sezvo ari kuda kutyora, kupfeka uye kubvarura, uye zvakanyanya. Panguva ino, iwe unozopedzisira wabhadhara yakawanda nekutenga mamwe mahedhifoni zvakadaro kune isina-nonsense headset ine yakasimba kuvaka uye yakanaka odhiyo isingapaze bhangi. Nechemumoyo, iyo HyperX CloudX inoramba iri yakanyanya kunaka yekupinda-level audio yeXbox.
Iyo HyperX CloudX ine mukurumbira musoro wemusoro uye pakati peinotengeswa zvakanyanya kune yayo inoshamisa odhiyo mhando, yakasimba kuvakwa, uye kureruka dhizaini. Vatauri vane simba vanobaya nepamusoro pemutengo wavo, vachigadzira ruzha runokwikwidza nemahedhifoni anodhura zvakanyanya. Mutsetse weHyperX's "Cloud" wakapihwa zita rakakodzera nekuda kwekuvaka kwayo kukareruka uye airy earcups, izvo zvinounza nyaradzo yakakomba pasina kutyora bhangi. Iyi yakanaka headset uye inoramba ichinyanya kukosha pane "yakanakisa Xbox headset" zvinyorwa pasi rese.
Chiitiko cheMic hachina kunaka
$ 60 kubva kuAmazon
Kana iwe uchida pro-giredhi headset pane bhajeti, tarisa iyo HyperX CloudX. Iyo simbi furemu inoita kuti iwedzere kusimba kupfuura mazhinji mumutengo uno, ichiiita kutenga kwakakodzera kune vechidiki, iine maficha anozofadza zvakanyanya vanonzwisisa vatambi.
Yakanakisa Xbox Series X/S Headset yePure Audio: Corsair HS75 XB
Corsair HS75 XB mutsva kuXbox Series X headset nzvimbo, uye yatove nyore imwe yeakanakisa Xbox Series X, Series S mahedhifoni kunze uko. Chii chinoita kuti Corsair HS75 XB inake kunaka kwayo mhando yekuteerera, iyo yakanyatso siyana nehuremu uye simba. Dzimwe wongororo dzakaishoropodza nekuremerwa, uye zvechokwadi, kana usiri fan weiyo, unogona kuigadzirisa uchishandisa iyo Dolby Atmos app paXbox yako. Kana iwe wakafanana neni uye uchida kunzwa simba rakazara rekuputika, zvinotonzwika zvakanaka kunze kwebhokisi. Iyi mahedhifoni ndeye ruzivo uye kukosha kwesendi rose.
Beyond pure audio quality, iyo Corsair HS75 XB inongowana yakawanda chaizvo. Iyo yakaenzana zvakanaka neyepamusoro-giredhi kunyaradza uye inoshanda kunze kwebhokisi nekuda kweXbox Wireless. Iine dhizaini yakapfava asi ine sexy, ine mic inobvisika iyo zvakare inobaya pamusoro pehuremu hwayo mumhando yekurira. Kunyangwe nechimiro chekuona, haisi yakavhurika-kumashure headset, sezvakataurwa nezvimwe zvitoro, zvichikupa iwe inonyudza chiitiko yakasimudzwa nekodhi kodhi yeDolby Atmos.
Ndakaona iyo sidetone ichiti yakanyarara, ichiita kushomeka kwesoftware yekumisikidza chinhu chinorwadza. Sezvineiwo, haidi, zvakadaro, sezvo yakangonaka kunze kwebhokisi: hapana-frills, yakachena odhiyo, yakanaka chigadzirwa.
Stunning mbishi soundscape
Yakagadzirwa zvakanaka neyakagadzika dhizaini
Sidetone yakanyanya kunyarara
$ 150 kubva kuAmazon
Kana iwe uchida mahedhifoni ane inoshamisa kudhirowa kudhindwa uye usinganei nezvakawanda nezve yakawedzera frivolities senge config software nezvimwe zvakadaro, iyo HS75 XB kubva kuCorsair yakaputika kumusoro kweyedu yepamusoro Xbox Series X, Series S headset runyorwa.
Imwe headset yandakashandisa yakawanda ndeye Astro A50, zvichibva pakuti inoshanda zvakasiyana-siyana. Nekuseta kwangu, kukwanisa kudyisa SPDIF optical odhiyo uye kusanganisa iyo neruzha kubva kuPC yangu kubva kuChat apps seDiscord yakakosha semugadziri wemukati, kugadzira mavhidhiyo paYouTube chiteshi kana kutenderera kwemutambo, zvichingodaro. Zvinonditendera kuti ndive nehedhiseti yakasungirirwa zvachose kune yangu Xbox nePC ine mudziyo mumwe chete. Iko kuchinjika ndechimwe chinhu chandinoona chakanakira kuseta kwangu, kunyangwe mutengo wacho uchirambidzwa zvakanyanya kune avo vasingazopedze kushandisa ese maficha ayo. Kana iwe ukagona kurova mutengo, zvakadaro, iwe uchaona iyi headset isiri ipfupi pane zvinoshamisa, ine yakanakisa ruzha, nyaradzo, kuvaka, uye isina waya nyore. Ini ndinoshandisa zvakare LucidSound LS50X sechinotsiva iyo A50 kero yangu yechipiri, sezvo iyo Bluetooth inounza kumwe kuchinjika kwandinoda neAstro A50, kunyangwe iine odhiyo iri nani nekundinyaradza.
Kune ruzhinji rwevanhu, zvakadaro, ndingakurudzira LucidSound LS35X. Ini pachangu ndinowana iyo LucidSound odhiyo mbiri kuti isvike kumusoro kupfuura ese Turtle Beach neAstro, uye mamwe mabhureki anokwikwidza, ane chiyero chakanaka pakati pekunyudza odhiyo uye tactical ruzha cues. Ini zvakare handikwanise kuwana yakakwana yeinotonhorera gel LucidSound inowedzera mumusanganiswa, ichiita kuti vagadzikane. Iyo maikorofoni zvakare yakachekwa pamusoro peLS35X, ichirova kunze vazhinji vevakwikwidzi vayo. Iyo yakanyanya kuderera ndeye mandatory firmware update yeiyi headset, inoda kubatana kwePC.
Kana iwe usingade kupaza bhangi asi uchiri pfuti yemhando yakanaka, ini ndinogara ndichikurudzira iyo Turtle Beach Atlas Pro wired headset. Inogona kurasikirwa neimwe yekurerukira isina waya, uye kuwana yakakwirisa yekuziva kwenzvimbo kungangoda imwe yekuwedzera. Zvakadaro, ruzha rwacho rwakakura, iine dhizaini yakasimba-inosimbisa simbi, yakadzivirirwa zvine rupo munzeve iri nyore munzeve, uye inochinjika zvakanyanya cabling inomira muyedzo wenguva.
Usakanganwa, zvese zvako akanakisa Xbox Rimwe mahedhifoni uye yakanakisa Xbox One isina waya headset ichashanda paXbox Series S uye X kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira. Parizvino, zvinoita sekunge zvese zvichashanda, zvakadaro. Mahedhifoni ane SPDIF madhoki seAstro A50 anozoda kubatana neTV yako pane yako Series S kana X, zvakadaro.
Chinyorwa cheakanakisa Xbox One isina waya